+100500 - eyaziwa masonto onke ukudluliswa Inthanethi, okuyinto namuhla has a lot of udumo entsheni Russian futhi Ukraine. Umsunguli, umdali, yedwa inkosi show Maxim Golopolosov - Russian Blogger ethandwa futhi ubuso ezingaguquki "Pepper" siteshi.
Inkinga ikuphi-ingabe Max 100.500 nokuphila kwakhe iphrojekthi
Famous namuhla Golopolosov ubuntu Maxim wazalwa 1 Novemba 1989. On umbuzo lapho Max uhlala ka 100.500 futhi lapho ngqo edolobheni azalwa, zonke izinsiza inthanethi ukunikeza impendulo efanayo - muzi omkhulu eMoscow. Ngatadisha phambili esikhathini esizayo esikoleni eMoscow, abahola amamaksi wodwa kakhulu iminyaka eyisishiyagalolunye, ngemva ukungaphazanyiswa umpheki bafundile, sabe enguqulweni yesiNgisi. Ngisho nangaphambi kokuba iphrojekthi Max ezingamaKristu kwakudingeka zisebenzele unyaka owodwa njengothisha umpheki futhi inkampani courier wendawo. Ngenxa uthando lwakhe umculo Max 100.500 nabangane zakhe zasebuntwaneni wanquma ukwakha iqembu pop ngokuthi Inkathi 2nd. Ngesikhathi ngiba ibhungu, Maxim yayisivele ngokuqinile kwakhiwa umbono wakhe omubi mayelana ukubhema, utshwala nezidakamizwa. bands Izintandokazi umbhali odumile TV project: The Nzalo, Sum 41, 2ndSeason, Blink 182 nabanye.
project "100 500"
Umqondo ukudala iphrojekthi ebizwa ngokuthi "100 500" wafika Max ngemva kokubuka le video of the American ukuzijabulisa show "= 3", eholwa TV umethuli Ray William Johnson. Uhlelo lokuqala owaziwa kuze kube manje show wathwebula umngane kwamakhelwane, yena yafakwa izincwadi, okuyinto atholakele ekhaya, kanye ukukhanya esetshenziswa izibani ezimbili ngaphandle plafonds. Ngemva kokudedelwa uchungechunge Inthanethi lokuqala "100 500" Maxim Golopolosov waqala ukufunda emigwaqweni siqu sakhe ngesandla cut futhi ezinamasondo ujenga kwashesha ezingalindelekile yatha- nempumelelo. Ezingavamile Russia nase-Ukraine baye baba ukujabulisa isiqophi inthanethi umbukeli okukhiphayo ukukhishwa okusha masonto onke. Kusukela ngaleso sikhathi, i-intanethi agcwaliswa isibukeli imibuzo nsuku zonke uhlobo elandelayo: "Ungubani yena lowo Maxim Golopolosov", "? Ingabe Maxim Golopolosov intombazane khona", "Inkinga ikuphi-ingabe Max 100.500?" Njll ...
TV iphrojekthi "+100500"
Impumelelo omkhulu futhi ukuthandwa iphrojekthi, adalwe Max, ngaso abakhiqizi of "Pepper" siteshi. Kusukela ngo-October 23, 2011, ababukeli nabalandeli Golopolosov ungacabanga futhi ujabulele ividiyo entsha "100 500" Online Channel at 23,00. Dlulisa ihlala akukho imizuzu engaphezu kuka-20 futhi kancane sihluke version Inthanethi. Manje, ngokungafani kuya project Inthanethi, lapho mat kwaba yokhalo bazibuyisa izilaleli hleka TV iphrojekthi kuphambene emalungelo ekucwaninga "zapikivaet" iyiphi inhlamba emlonyeni Maxim, ngaphezu kwalokhu okuqukethwe, okuyinto asetshenziswe lwethelevishini ingashintshwa izinhlobo esedlule oyenzile. Abantu abaningi abazi umsebenzi nombhali "100 500" bathi ngenxa ushintsho iphrojekthi ithelevishini, udumo lwakhe kwehle kakhulu, futhi umbukeli ayisaxhunyanisiwe waqonda njengendlela akanandaba futhi Max ngempela indoda gay. Manje umbuzo "Lapho enza Max 100.500?" Futhi "Unalo yini umama wakulowo inhliziyo?" Ukuze intanethi zingatholakala sincipha isibalo sawo.
Imiklomelo, izingxoxo kanye lokuqala oyibamba isipiliyoni Maksa Golopolosova
Max 100 500 manje has ezimbili Bekunifanele umklomelo, omunye wabo - ". Umehluko omkhulu" kuyinto "Runet Prize 2011", kanti eyesibili wathola ngaphansi odumile TV show Ngaphezu kwalokho, ukuthandwa Max uthi iqhaza lakhe ngesikhathi enengxoxo ku TNT futhi iqhaza kuhlelo "Mabathathe ukukhuluma." Futhi, okubaluleke, ngo-2014 eRussia nase-Ukraine kwafika ifilimu "Fast eMoscow-Russia» nge Sergei futhi Maxim Svetlakova Golopolosov. Manje sithemba ukuthi umbuzo othi "kuphi Max 100500 - Ikheli" "? Nobani 100.500 yakha ubuhlobo", Ingabe ugcwalise izinsiza inthanethi kakhulu, kanjalo ukubuyela udumo umlingisi futhi ithemba ngezinga elithile emsebenzini wabo wesikhathi esizayo.
Alexander Levin: "Ukuba umkhiqizi - Art"